ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ပြည်သူတို့၏သဘောထားအမြင် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (ဘိုကလေးမြို့နယ်/ ၃၀ . ၁. ၂၀၂၀) – Than Lwin
သံလြင္(Citizen Empowerment Program) အဖြဲ႔မွစီစဥ္သည့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚျပည္သူတို႔၏သေဘာထားအျမင္ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို
ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပုံခရုိင္၊ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၃၀ . ၁. ၂၀၂၀) ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊
ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္ပိုင္းခြဲကာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ဤသုို႔ သံလြင္(Citizen Empowerment Program) အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထုအျမင္သေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ႀကြစြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ ဦးရဲေအာင္(OMI)၊ ေဒသခံ အလင္းတန္းအဖြဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔(RDO) တုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူစဥ္ စိတ္ရွည္စြာ ေျဖၾကားေပးျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးပါေသာ ေက်းရြာ/ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
သံလွင်(Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့မှစီစဉ်သည့် ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ပြည်သူတို့၏သဘောထားအမြင် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ ဘိုကလေးမြို့နယ်တွင် (၃၀ . ၁. ၂၀၂၀) ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာနေပြည်သူများဖြင့်လည်းကောင်း၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နေပြည်သူများဖြင့်လည်းကောင်း နှစ်ပိုင်းခွဲကာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဤသိုု့ သံလွင်(Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့နှင့်အတူ ပြည်သူလူထုအမြင်သဘောထားစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင် တက်ကြွစွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသော ဦးရဲအောင်(OMI)၊ ဒေသခံ အလင်းတန်းအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအားလည်းကောင်း၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့(RDO) တို့အားလည်းကောင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ယူစဉ် စိတ်ရှည်စွာ ဖြေကြားပေးခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးပါသော ကျေးရွာ/ ရပ်ကွက်နေပြည်သူများအားလည်းကောင်း၊ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
Previous Post: လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း(ဒေးဒရဲမြို့နယ်/ကျေးရွာ)
Next Post: ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ပြည်သူတို့၏သဘောထားအမြင် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ( ဖျာပုံခရိုင်၊ ကျိုက်လတ်မြို့နယ်(၂ . ၂. ၂၀၂၀)